प्रधानमन्त्रीको अभिमान : सबैलाई अपमान | Hindu Khabar
नेकपा विभाजन भएपछि ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई ‘कुहिएको फर्सी’ पनि भने जब कि जनयुद्ध लडेका रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टलगायत नेताहरू भने ओलीसँगै छन् । जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भनेको विषयमा भट्टले प्रधानमन्त्रीसामु असन्तुष्टि जनाएको बताएका छन् । ‘नेताहरूले बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने धेरै कुरा छन् । तपाईंले त्यस्तो भन्नुभएको हो ? भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग सोधेको हुँ । उहाँले त्यस्तो भनेको होइन, मेरो कुराको गलत अर्थ लगाइयो भन्नुभयो,’ भट्टले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
पार्टी विभाजनअघि नेकपाको बैठक बस्ने विषयमा पनि ओलीले स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई हुल्लडबाज भनेका थिए । ‘म बैठक किन बस्ने ? त्यहाँ के समाधान हुन्छ ? एकसे एक हुल्लडबाजहरूसँग बैठक बसेर समाधान कसरी समाधान हुन्छ ?’ त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा पनि उनले भनेका थिए, ‘म त्यस्तो बैठकमा जान्नँ, चना र दूध खुवाएर तयार पारिएका मान्छेहरू जम्मा गरेर मेरो अपमान गर्न खोजिएको छ । त्यो थाहा छ । त्यसैले बैठकमा जान्नँ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ ।